Vidin-tsolika : Nandray andraikitra ny Fitondram-panjakana -
AccueilSongandinaVidin-tsolika : Nandray andraikitra ny Fitondram-panjakana
04/04/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy nitazam-potsiny ny Fitondram-panjakana fa avy hatrany dia nandray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny fiakaran’ny vidin-tsolika tampoka tao anatin’ny andro fety. Marihina mantsy fa niakatra 90 Ar be izao ny vidin’ny solika tamin’iny andro fety iny, ary tsy nisy fampilazana ny mpanjifa akory izany.
Manoloana izay indrindra, dia nandray fepetra ny Fanjakana ary namerina izany vidin-tsolika izany ho amin’ny vidiny teo aloha. Nambaran’ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier fa tsy maintsy nanapa-kevitra ny Fitondram-panjakana amin’ny fampiharana ny vidin’ny tena izy eo amin’ny solika. “Raha io resaka solika io no voakitikitika, misy fiantraikany avy hatrany amin’ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena izany. Noho izany, tsy maintsy nandraisana fepetra izany mba tsy hisian’ny korontana eo anivon’ny fiarahamonina”, hoy izy.
Ankoatra izay, voalaza fa tokony hisy ny fifanantonana an-databatra boribory eo amin’ireo mpandraharahan’ny solika sy ny Fanjakana hijerena hatrany ny marimaritra iraisaina. Amin’izany indrindra, raha ny nambarany hatrany, no ahafahana midinika ny firafitry ny vidin’ny solika. “Nisy ihany ny famoahana ny firafitry ny vidin’ny solika vonjimaika teo aloha teo saingy mbola tsy mahafa-po ny rehetra izany. Izay indrindra anefa no tokony hifanantonana ahafahana mijery ny marimaritra iraisana hametrahana ny firafitry ny vidin’ny solika hampiharina”, hoy ny praiminisitra
Notsindrian’ny praiminisitra fa manaja hatrany ny vidin’ny solika tena izy ny Fitondram-panjakana. Voalaza fa izany dia tafiditra indrindra amin’ny fitiavan-tanindrazana sy ny mpiara-belona, ka tokony samy hijery izay mahasoa ny firenena sy ny vahoaka ny rehetra.
ankara casper dans « Insécurité publique et disfonctionnements de nos institutions »
Araka ny efa fantatra, dia misy ambadika politika efa hatrany am-boalohany ny fitakiana nataon’ny fikambanamben’ny sendika eto Madagasikara na ny SSM. Tsy misy fitakiana mari-pototra ho an’ny tombontsoan’ny mpiasa ny azy ireo hatramin’izay fa dia ...Tohiny
Androm-pirenena ho an’ny fanadiovana : Nifanome tanana tamin’ny fanadiovana ireo mpiasam-panjakana
Governemanta Malagasy:NANOME TANANA KOA I ALEMANA
ankara casper: https://yenidenblogcu.wordpress.com/